Off-grid umoya inkqubo umbane gqith solar nawedizili - China Renergy Equipment Co., Ltd
Off-grid umoya inkqubo yonikezelo ngamandla elanga kunye diesel hybrid
Ukusebenza Umgaqo nkqubo:
umoya ephendulwa kunye panel elanga umbane, umbane ityala kwiqela ibhetri le yi eli ukuyibiza, sabe inverter, ubonelelo inkqubo AC amandla ngenxa imithwalo. Diesel generator isetyenziswa njenge back up amandla, iza kuqalisa xa umoya solar azonelanga, agibiseleke ibhetri ukukhusela ibhetri.
Le nkqubo isetyenziswa ngokubanzi apho kukho ungenagunya ndawo ekude; Ukwenzela ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye nokusingqongileyo longcoliseko ugcine iindleko, usebenza umoya namandla elanga ukuhlangabezana neemfuno ukusebenzisa amandla. Le nkqubo anokuyisebenzisa ezipheleleyo amandla amatsha nokuphucula ukusebenza omtsha amandla ukunciphisa ukusetyenziswa idizili kunye nokusingqongileyo longcoliseko ukonga umbane
RW-5kW pitch bume, DC240V
Off-grid solar umoya kanye isilawuli diesel hybrid
design Modularized; ukuphucula inkqubo ukuthembeka ngokuhlela ezingasafunekiyo, oqinisekisa inkqubo basenako ukusebenza xa omnye ezisezantsi uye ukungasebenzi.
complementation energy Multiple; ukulawula amandla rated ukutshintshela idizili zokusetyenziswa namandla xa amandla inkqubo elanele kaloku ndinqumle umthwalo engeyomfuneko ukuze bandise ixesha kwinkqubo yonikezelo amandla.
Ekubeni amandla olusezantsi ezingaqondakaliyo nokunqongophala, ukusebenza kwenkqubo kufuneka siwazise; inkqubo yamkela iimodyuli amandla IGBT kunye Imo yolawulo PWM ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwinkqubo.
Inkqubo isebenzisa uyilo iimodyuli ukuqinisekisa indlela scalability; ukunika ukuzitshintshela ukwandisa umthamo power nkqubo ukuqinisekisa inkqubo uphuculo
isilawuli esizisebenzelayo high
Isicelo Inkqubo yonke igqiba indlela ngokuzenzekela ukulawula inkqubo nokunciphisa kolawulo lomntu, ukuphucula nje ukwanela ukusebenza, kodwa kwandisa inkqubo ukhuseleko nokuthembeka
isicelo ekhaya, isiqithi, idolophana, isikhululo samandla elincinane, inkqubo grid micro, lwasekhaya, iifama ezincinci emaphandleni, ezolimo, zorhwebo.
ixesha Post: Apr-03-2018